September 2017 – CRM
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မကြာခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတွေကြောင့် နေရပ်က စွန့်ခွာထွက်ပြေးပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင်းက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသူတွေကို တာဝန်ရှိသူတွေက မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ လူမျိုးအမည် မပါဝင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒုက္ခသည်တချို့က မှတ်ပုံတင်ဖို့ လက်မခံ ငြင်းဆန်ခဲ့ကြတယ်လို့ AFP သတင်းက ဖေါ်ပြပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်တွေက ဒုက္ခသည်အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားတွေ ထုတ်ပေးတဲ့အခါ ကဒ်ပြားပေါ်က နိုင်ငံသားအဖြစ် ဖြည့်စွက်ရမည့်နေရာသာပါပြီး လူမျိုးအဖြစ် ဖြည့်စွက်ရမယ့်နေရာ မပါဝင်တဲ့အတွက် မှတ်ပုံတင်ဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ကြတာလို့ သိရပါတယ်။ အသစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ ဒုက္ခသည် ၅ သိန်းနီးပါးကို မှတ်ပုံတင်ကိစ္စ ဆောင်ရွက်ပေးနေရာမှာ အခုထိ မှတ်ပုံတင်ပြီးသူ နှစ်သောင်းလေးထောင်လောက် ရှိတယ်လို့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကဒ်ပြားရဲ့ လူမျိုးနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ဖေါ်ပြဖို့ ဘင်္ဂလာေးဒ့ရှ် အစိုးရ က ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် […]
Posted on September 28, 2017 Author swelsone	Comment(0)
UNITED NATIONS/YANGON (Reuters) – U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley on Thursday called on countries to suspend providing weapons to Myanmar over violence against Rohingya Muslims until the military puts sufficient accountability measures in place. It was the first time the United States called for punishment of military leaders behind the repression, but […]
Alleged Atrocities Need International Inquiry Burma’s military announced this week that it had dug up 28 bodies inamass grave in northern Rakhine State. The following day, they claimed to have found another 17 bodies. While continuing to block independent observers from the area, the military suggested that dozens of Hindu,aminority community, […]
Posted on September 27, 2017 Author swelsone	Comment(0)
YANGON: Myanmar’s government will manage the redevelopment of villages torched during violence in Rakhine state that has sent nearly halfamillion Rohingya Muslims fleeing to Bangladesh,aminister was reported on Wednesday as saying. The plan for the redevelopment of areas destroyed by fires, which the government has blamed on Rohingya insurgents, is likely […]
Canada, U.S. work to step up pressure on Myanmar’s military leadership
Canada and the United States are in talks about how they can intensify pressure on Myanmar’s powerful military leadership for its role in ethnic cleansing against Rohingya Muslims, amid reports that 480,000 members of the minority group have fled violence in the Southeast Asian country. Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland said she spoke with U.S. […]
Posted on September 26, 2017 Author swelsone	Comment(0)
Posted on December 24, 2017 Author swelsone